Victor Cham Thar on Flipboard
Victor Cham Thar
9 Flips | 1 Magazine | @chamthar | Keep up with Victor Cham Thar on Flipboard,aplace to see the stories, photos, and updates that matter to you. Flipboard createsapersonalized magazine full of everything, from world news to life’s great moments. Download Flipboard for free and search for “Victor Cham Thar”
Atameeting (အစည်းအဝေးတွင်) ======================== Sorry, it always takesafew minutes for everyone to arrive. ဆောရီးပါ၊ လူစုံအောင် အမြဲဘဲ မိနစ်အနည်းငယ် ကြာတတ်ပါတယ်။ Not to worry. / No problem.. အားမနာပါနဲ့/ကိစ္စမရှိပါဘူး။ Hi, everyone, sorry I’mabit late. I just needed to gather some files for our meeting. နှုတ်ဆက်ပါတယ်၊ အားလုံးဘဲ၊ ကျွန်တော်နဲနဲ နောက်ကျတာ ဆောရီးပါ။ အစည်းအဝေးအတွက် ဖိုင်တွေအချို့ စုဆောင်းဖို့ လိုပါတယ်။ So, if everyone would like to takeacopy of today’s agenda. ဒါဆို အားလုံး ယနေ့ အစည်းအဝေး အစီအစဉ် မိတ္တူတစ်စောင် ရပြီဆိုရင် Well, I suppose we should makeastart. ကျွန်တော်တို့ စ လိုက်ကြရအောင်။ So, shall we go down to business? ဒါဆို လိုရင်းအလုပ်ကို စကြရအောင်။ Right, let’s makeastart, shall we? ဟုတ်ပြီ၊ စကြမလား။ So, shall we start again at, say 3:30? (beforeabreak) ဒါဆို ဆိုကြပါစို့ ၃နာရီခွဲမှာ ပြန်စကြမလား။ Sounds good.
Medical Knowledge - ဆေးပညာဗဟုသုတ
Sorry for my absence for the last few weeks, it is due to technical difficulty and also I was busy. Thank you all for interested in our page. I will …
Transfer News ဖြစ်မြောက်ခဲ့သည့် အပြောင်းအရွှေ့များ ချဲလ်ဆီးသည် ကျူ ပီအာတိုက်စစ်မှူးရီမီကို စာချုပ်ပါ လျှော်ကြေး ပေါင်(၁၀.၅)သန်းဖြင့် (၄)နှစ်စာချုပ် ချုပ်ဆိုခေါ်ယူခဲ့သည်။ အေစီမီလန်သည် ချဲလ်ဆီး လူငယ်ကစားသမား ဗန်ဂျင်ကယ်ကို အငှားခေါ်ယူခဲ့ကြောင်း အတည်ပြုသည်။ မန်ယူကွင်းလယ်လူ ကာဂါဝါမှာ အသင်းဟောင်း ဒေါ့မွန်သို့ ပေါင်(၆.၃)သန်းဝန်းကျင်ဖြင့် ပြန်လည်ပြောင်းရွှေ့သွားခဲ့သည်။ ၀က်စ်ဟမ်းသည် ဘာစီလိုနာ ကွင်းလယ်လူ အဲလက်စ်ဆောင်းကို တစ်ရာသီ အငှားစာချုပ်ဖြင့် ခေါ်ယူလိုက်သည်။ အက်သလက်တီကိုမှာ တိုရီနိုတိုက်စစ်မှူးဆာစီကို (၃)နှစ်စာချုပ်ဖြင့် ခေါ်ယူရန် သဘောတူညီမှု ရရှိခဲ့သည်။ ဖူလ်ဟမ် တိုက်စစ်မှူးမီထရိုဂလူသည် အသင်းဟောင်း အိုလံပီယာကို့စ်သို့ အငှား ပြန်လည်ပြောင်းရွှေ့သွားခဲ့သည်။ .............................................................................................................. ဖြစ်မြောက်ဖွယ်ရှိသည့် အပြောင်းအရွှေ့များ တိုက်စစ်မှူးနီဂရီဒို ဗလင်စီယာသို့ ပြောင်းရွှေ့ရန် သဘောတူညီမှု ရရှိသွားသည့်အတွက် မန်စီးတီးမှာ မိုနာကို တိုက်စစ်မှူးဖယ်လ်ကာအိုကို ခေါ်ယူရန် ကြိုးပမ်းနေကြောင်း သိရသည်။ ဆန်းဒါးလန်းနှင့် စပါးတို့မှာ မန်ယူ တိုက်စစ်မှူးဝဲလ်ဘတ်ကို အငှားခေါ်ယူလိုနေပြီး ၎င်းအတွက် မန်ယူအသင်းက ပေါင်(၄)သန်း ရရှိလိုသည်ဟု သိရသည်။ စိန့်အီတီယန်ကို ပီအက်စ်ဂျီအသင်း (၅)ဂိုးပြတ် အနိုင်ရခဲ့သည့်ပွဲစဉ်ကို ပေါ့ဘာလာရောက်ကြည့်ရူခဲ့ပြီးနောက် ပီအက်စ်ဂျီသို့ ပေါ့ဘာ ပြောင်းရွှေ့ရန် နီးစပ်နေပြီဟု သတင်းထွက်ပေါ်လာသည်။ ရီးရဲလ်သည် မန်ယူ တိုက်စစ်မှူးဟာနန်ဒက်ဇ်ကို အငှားခေါ်ယူရန် စိတ်ဝင်စားနေကြောင်း စပိန်မီဒီယာများက ဖော်ပြထားသည်။ @z (ရိုးရာလေး) www.yoyarlay.com
MPT ဆင်းကဒ်များ ၁၅၀၀ ကျပ်ဖြင့် စတင်ရောင်းချ၊ ၀ယ်ယူသူများဖြင့် စည်ကား ---- --- ---- --- ၁.၉.၂၀၁၄ ရက်နေ့ နံနက် ၉း၃၀ နာရီမှစတင်၍ နေပြည်တော်၊ ဇမ္ဗူသီရိမြို့နယ် သပြေကုန်းဈေး ပွဲရုံတန်း ရုံအမှတ် ၆၅/၆၆ တွင် ဖွင့်လှစ်ထားသော (Elite Tech) Sim ကဒ်အရောင်းဆိုင်တွင် MPT Sim ကဒ် ၀ယ်ယူသူများ ဖြင့် စည်ကားလျက်ရှိသည်ကို တွေ့ရှိရပါသည်။ မှတ်ပုံတင် မိတ္တူတစ်ဆောင်လျင် တစ်ကဒ်နှုန်းရောင်းချပေးမှာဖြစ်ပြီး ဈေးနှုန်းမှလည်း ၁၅၀၀ိ/သာဖြစ်ကြောင်းပြောပြပါသည်။ ကဒ်အရေအတွက် သတ်မှတ်ထားခြင်းမရှိဘဲ ဆိုင်တွင်ရှိသလောက် ရောင်းချပေးမည်ဖြစ်ပါကြောင်း အရောင်းတာဝန်ခံတဦးက ပြောကြားသည်။ Simကဒ် လာရောက်ဝယ်ယူသူတစ်ဦးမှလည်း MPT မှ ယခုကဲ့သို့ သုံးစွဲမည့် ပြည်သူလူထုလက်ထဲသို့ တိုက်ရိုက်ရောင်းချပေးသည့်စနစ် အမှန်တကယ်ကောင်းမွန်ပါကြောင်း၊ ၂၀၁၃မှ၂၀၁၄ ဇူလိုင်လအထိ အုပ်ချုပ်သူ အဆင့်ဆင့်မှ မဲခွဲတမ်းနှင့်ပေးခဲ့သည့်အတွက် အမှန်တကယ် သုံးစွဲမည့်သူလက်ထဲသို့ မရောက်ဘဲ ပြင်ပဈေးကွက် တွင်သာ ၁၅၀၀ိတန်သည့် ကဒ်တစ်ခုကို တစ်သိန်းကျော်ဝယ်ယူသုံးစွဲခဲ့ရပါကြောင်း၊ Sim ကဒ်ကြောင့် ချမ်းသာသွား သူများတွေ့မြင်ရကြောင်း၊ ယခုလိုပွင့်လင်းမြင်သာစွာပြည်သူလက်သို့တိုက်ရိုက်ရောင်းချပေးခြင်းသည် ကောင်းမွန် သောစနစ်ဖြစ်ပါကြောင်း၊ ၁၅၀၀ိ/တန် Sim ကဒ်ကို ၁၅၀၀ိဖြင့် ၀ယ်ယူပြီး Elite ဆိုင်ထဲမှ ထွက်လာသော သပြေကုန်းရပ်ကွက်သား ကိုဝင်းထွန်းမှ ပြောပြပါသည်။ အလားတူ မြန်မာ့ဆက်သွယ်ရေးလုပ်ငန်း နေပြည်တော်စာတိုက်ကြီးတွင်လည်း ဖော်ရွေသောဝန်ထမ်းများမှ စာပို့သူတို့၏ အမြန်ချောပို့ခြင်းလုပ်ငန်း၊ မှတ်ပုံတင်စာပို့ခြင်းလုပ်ငန်း သက်သာသောနှုန်းထားများဖြင့် လက်ခံ ဆောင်ရွက်ပေးလျက်ရှိပြီး ပုဂ္ဂလိက အမြန်ချောပို့လုပ်ငန်းမှ စာတစ်စောင်ပို့ခ ၂၅၀၀ိ/ယူနေချိန်တွင် မြန်မာ့ဆက် သွယ်ရေးလုပ်ငန်းမှ အနိမ့်ဆုံး ၅၀၀ိမှ အများဆုံး ၇၀၀ိ စာရေးသူအတွေ့အကြုံအရ တင်ပြရခြင်းဖြစ်ပါသည်။ ဆက်လက်၍ ယခင်ငွေပို့ခ ၁၀၀ိလျှင် ၅ိ/နှုန်းမှ ယနေ့စနစ်သစ်ဖြင့် ၁၀၀ိ/လျှင် ၅၀ိ ပြားနှုန်းသာကောက်ခံတော့ ကြောင်း၊ ပြောင်းလဲလာသော မြန်မာ့ဆက်သွယ်ရေးလုပ်ငန်း၏ ပြည်သူ့ဗဟိုပြုဆောင်ရွက်ပေးမှုတရပ်အဖြစ် ချီးမွမ်းလျက်ရှိကြကြောင်း သိရသည်။ ထွန်း(နေပြည်တော်)
DOWNLOAD<p>Download your ePaper on your tablet, smartphone or laptop, and read it anywhere.<p>OFFLINE<p>Once your ePaper is downloaded you don't need wi-fi. …